ၾကက္သီးထဖြယ္ရာရႈခင္းေတြနဲ႔ ကမၻာ႔အျမင့္ဆံုးမိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီး ၄ ခုအေၾကာင္းကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္…. - Zeekwat Hot News
ၾကက္သီးထဖြယ္ရာရႈခင္းေတြနဲ႔ ကမၻာ႔အျမင့္ဆံုးမိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီး ၄ ခုအေၾကာင္းကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္….
June 12, 20190238
Source : Saigoneer/Shutterstock
A waterfall in the middle of the city? There's one in Guizhou, China. What some people mistook foramassive leak is actually an artificial waterfall on the facade of Liebian International Building in Guiyang, the capital of Guizhou. The water feature stands 350 ft high on the side of the 397 ft skyscraper. It has met criticism among locals who think running the waterfall isawaste of electricity as it costs $118 an hour to power the waterfall's four pumps. In its defense, the building claims that the waterfall will only run on special occasions and use recycled water. —AFP
Sourcec :Leonard Zhukovsky/Shutterstock
နိုငျငံတစျနိုငျငံတိုးတကျလားမတိုးတကျဘူးလားဆိုတာ အမွငျနဲ့ဆုံးဖွတျလို့ရနိုငျတဲ့အရာတှထေဲ မိုးမြှောျတိုကျတှပေါဝငျလို့နပေါတယျ။ ပပေေါငျးဆယျခြီရာခြီမွငျ့မားကွတဲ့ မိုးမြှောျတိုကျကွီးတှပေေါျက မွငျရတဲ့ ရှုခငျးတှဟောဆိုရငျလညျး လတေဖွူးဖွူးတိုကျနတေဲ့ကွားက ကွကျသီးထစမှောအမှနျပါပဲ။ ကမ်ဘာအနှံ့က ခရီးသှားတှကေို ဆှဲဆောငျနတေဲ့ အမွငျ့ဆုံးမိုးမြှောျတိုကျကွီးတှအေကွောငျး Insider မှာ တှေ့မိတဲ့အတှကျ ပွနျလညျကိုးကားမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ဟိုခြီမငျးမှာရှိတဲ့ မိုးမြှောျတိုကျကွီးကတော့ ဗီယကျနမျမှာ အမွငျ့ဆုံးလို့ The Skyscraper Center က သတျမှတျထားခဲ့ပါတယျ။ ပပေေါငျး ၁၅၄၀ မွငျ့ပွီး အထဲမှာဆိုရငျတော့ ကွယျငါးပှငျ့စားသောကျဆိုငျကွီးတှေ၊ ဇိမျခံဟိုတယျကွီးတှနေဲ့ ရုပျရှငျရုံတှအေပွငျ စကိတျကှငျးတှတေောငျ ထညျ့သှငျးထားပါတယျတဲ့။
ဒီမိုးမြှောျတိုကျကတော့ နယူးယောကျတစျမွို့လုံးမှာ အကွီးဆုံးတော့မဟုတျပမေယျ့ ကမ်ဘာ့ဧရိယာအသေးဆုံးမိုးမြှောျတိုကျဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကိုအပိုငျသိမျးထားခဲ့တာပါ။ ပွောရရငျကမ်ဘာ့အပိနျဆုံး မိုးမြှောျတိုကျလေးပေါ့။ နယူးယောကျရဲ့ 111 West 57th လမျးမှာတညျရှိပွီး Central Park ရဲ့ အပေါျစီးရှုခငျးတှကေို တဝကွီး ခံစားရမှာပဲဖွစျပါတယျ။
Liebian International Plaza လို့လညျး လူသိမြားတဲ့ မိုးမြှောျတိုကျကွီးကတော့ တရုတျနိုငျငံရဲ့ Guizhou အနောကျတောငျပိုငျး Gyuyang မှာ တညျရှိနပေါတယျ။ ဟိုတယျတှေ၊ ရုံးခနျးတှအေပွငျ ဈေးဝယျစငျတာကွီးပါ ထညျ့သှငျးထားတာဖွစျလို့ အဲဒီဒသေကလူတှအေတှကျတော့ အားကိုးလောကျစရာပါပဲ။ ဒီအပွငျ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး လူလုပျရတေံခှနျအတုဟာဆိုရငျလညျး ဒီအဆောကျျအဦရဲ့ ရှေ့မကြျနှာစာမှာ ထညျ့သှငျးဖနျတီးထားပါသေးတယျ။ ရတေံခှနျတောငျ ပေ ၃၅၀ ရှိတယျဆိုတော့ အဆောကျအဦရဲ့အမွငျ့ကို စဉျးစားသာကွညျ့ပါတော့။
ပြားလပို့ပုံသဏ်ဍာနျမြိုး ဒီဇိုငျးထှငျဖနျတီးထားတဲ့ The Vessel ကတော့ ဗွိတိသြှဗိသုကာပညာရှငျ Thomas Heatherwick ရဲ့ လကျရာကွီးပါ။ Hudson မွစျကမျးနဘေးမှာ တညျရှိတာကွောငျ့ တခွားနရောတှထေကျ လတေိုကျတာကို ပိုခံစားရမှာဖွစျပွီး အမွငျ့ပကေတော့ ၁ပ ၁၅၀ ရှိပါတယျ။
Ref : Insider
“အခမ္းနားဆံုးေမတၱာ” ရိုက္ကြင္းေပၚမွာလိုက္ဖက္ညီစြာေတြ႔ရတဲ့ ေနတိုးနဲ႔ ေနျခည္ဦးတို႔ရ႕ဲပံုရိပ္ေတြကို မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္…..